Ady & Fifandirana · Avrily, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Avrily, 2009
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Avrily, 2009
Madagasikara: manahy ny hiverenan'ny korontana ny mponina taorian'ny fialan'ny filoham-pirenena
Madagasikara 23 Avrily 2009
Ankehitriny dia ny anankiray izany (Rajoelina). Tonga eo amin'ny fiafarany ny fifandrohitana fahefana teto Madagasikara hatramin'ny volana janoary no mankaty. Omaly alarobia mantsy, taorian'ny fanandramana nataon'ireo mpanara-dia an'i Andry Rajoelina hanala an-dRavalomanana eo amin'ny fitondrana, dia nandray ny fanapahana ny lapam-panjakana tao Ambohitsirohitra ny tafika, izay lasa niandany tamin'i Andry...
Ireo antony sy ny vokatry ny fanonganam-panjakana taty Madagasikara
Taorian'ny famindram-pahefana natao ny 17 martsa taty Madagasikara dia nihamafy hatrany ny korontana tao amin'ity nosy ity. 15 000 no isan'ny olona tsy nanaiky iny fanonganam-panjakana iny no nanamarika efa ho enina andro izao ary notifirin'ny miaramila tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso efa ho 3 andro tsy an-kiato izao. Ny 28 martsa...
Madagasikara: mizotra ho any amin'ny fanoloana mpiambina?
Madagasikara 22 Avrily 2009
Mety hipaka amin'ny kihon-dalana ny krizy eto Madagasikara: ny fiatombohan'ny fiafaran'ny fanjakan-dRavalomanana. raha mbola tsy fantatra mazava hoe iza no tena manana ny fahefana, dia tsapa fa nifidy hiaraka amin'ny ben'ny tanànan'Antananarivo taloha, Andry Rajoelina, ny tafika. Efa eo ambany fifehezan-dRajoelina ny biraon'ny praiministra sy ny fahitalavitra an'ny fanjakana Milaza...
RDC: Mandroba tranon'olona ireo miaramila tsy mandray karama
R.D. Kongo 14 Avrily 2009
Ny herinandro lasa teo dia nolazain'ny fampielezam-peo Radio Okapi fa mpikambana ao amin'ny FRADC, miaramila any Repoblika Demôkratika Kongo, no nandroba trano maro tany Kirumba, 200km any avaratry Goma. Ireo miaramila, izay tsy nandray karama nandritra ny 3 volana izay, no mangalatra vola, telefona sy ireo fitaovana eletronika: D’autre part,...